एनएमबी बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ९ फागुन २०७४) | गृहपृष्ठ
Home लगानी एनएमबी बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ९ फागुन २०७४)
लगानी 195 views
एनएमबी बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ९ फागुन २०७४)
बैङ्कले पूँजी वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको १ करोड १४ लाख कित्ता थप शेयर (एफपीओ) निष्कासनका लागि नागरिक लगानी कोषलाई विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । साथै, बैङ्कलाई लण्डनस्थित फाइनान्सियल टाइम्सले सन् २०१७ का लागि ‘बैङ्क अफ दी इयर २०१७’ द्वारा सम्मानित गरेको छ ।
बैङ्कले यो अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा ४४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । बैङ्कले यो त्रैमाससम्म १ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष त्रैमासमा उसले ७० करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
पूँजी वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानीलाई सन्तुलनमा राख्न कम्पनी सफल भएको देखिन्छ । यो समयमा उसको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३१ दशमलव १८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही समयमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. २५ दशमलव ८२ थियो ।
जगेडा कोषमा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कोषमा अहिले ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ ।
निक्षेप र कर्जाको कुरा गर्दा उसले यो त्रैमासमा ८० अर्ब ५५ करोड निक्षेप उठाई ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सफल भएको छ ।
निक्षेप १७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने कर्जा प्रवाह १७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
मुख्य आम्दानीको कुरा गर्दा खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशत वृद्धि भएर १ अर्ब ३९ करोड २३ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन नाफा ३९ प्रतिशत वृद्धि भएर १ अर्ब १३ करोड ६४ लाख पुगेको छ । आम्दानीमा प्रोभिजन गर्दा ९ करोड ५६ लाख घट्न पुग्यो भने जोखीम कोषबाट २५ करोड ६५ लाख फिर्ता भएको छ ।
निष्क्रिय कर्जामा मात्रामा केही कमी ल्याएको छ । यस अवधिमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ८९ प्रतिशतबाट घटेर १ दशमलव २० प्रतिशतमा आएको छ ।
ब्याजदर वृद्धिका कारण बैङ्कको पूँजीकोष लागत भने वृद्धि भएको छ । कम्पनीको पूँजी कोष लागत ४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ७ दशमलव शून्य ७ पुगेको छ भने ब्याज स्प्रेड दर ३ दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।
बैङ्कले प्रकाशन गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी ३१ दशमलव १८ रुपैयाँ, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ८० रुपैयाँ ९८ पैसा, तरलता अनुपात २४ दशमलव ३२ प्रतिशत र प्रतिशेयर कुल सम्पतिको मूल्य १४ सय ९१ रुपैयाँ ६६ पैसा छ ।
समीक्षा अवधिमा बैङ्क निक्षेप तथा कर्जामा बढाएर खुद मुनाफासँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि गर्न सफल भएको छ । प्रोभिजनका लागि गतवर्षको तुलनामा कम रकम छुट्याउनुपर्दा उसको सञ्चालन मुनाफामा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : एनएमबी बैङ्कलाई ४ सय ९० रुपैयाँमा प्रतिरोध
प्रतिरोध २ : ५०० । प्रतिरोध १ : ४९० । अन्तिम कारोबार मूल्य : ४६५ । टेवा १ : ४६० । टेवा २ : ४४०
एनएमबी बैङ्कको शेयरमूल्य ९ महीनायता घट्दो प्रवृत्तिमा छ । केही दिनयता यस कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्ने सङ्घर्षमा रहे पनि ४ सय ९० रुपैयाँको बिन्दुमा प्रतिरोध पाएको छ । गत बिहीवार ४ सय ९० मा प्रतिरोध पाएर यस हप्ताको पहिलो दिन भने ६ रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव २५ प्रतिशत घटेर ४ सय ७५ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो । मङ्गलवार यस बैङ्कको शेयरमूल्य १० रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ११ प्रतिशत घटेर ४ सय ६५ रुपैयाँमा बन्द भएको छ ।
पाँचदिने मुभिङ एभरेजअनुसार यस बैङ्कको शेयरमूल्य घट्दो प्रवृत्तिमा छ भने २१ दिने मुभिङ एभरेजअनुसार शेयरमूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा छ ।
एडीएक्स सूचकअनुसार पनि यस बैङ्कको शेयरमूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा छ ।
एटीआर सूचक बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको हुनाले यस कम्पनीको शेयरमूल्यमा उतारचढाव बढ्दै गएको बुझाएको छ ।
विभिन्न प्राविधिक सूचकहरूले यस कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बुझाएको छ । गत साताको बढाइको कारण यी सूचकले बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको सङ्केत गरेका हुन् । तर, वास्तवमा मैनबत्ती विश्लेषणअनुसार यस कम्पनीको शेयरले ४ सय ९० रुपैयाँको प्रतिरोधको परीक्षणपछि उच्च विक्रेताको चाप सामना गर्नुपरेको देखाउँछ । त्यस कारण हालको अवस्थामा ‘पर्ख र हेर’को रणनीति ठीक हुने देखिन्छ ।